Yommuu geessitoota dabaltu, akkumsaan lama kontootti fudhatamuu qaba: ol kaa'uu irratti akka sadhaatawaatti yookiin akka haqaatti qindaa'uu isaanii, fi faayiliin jiraachuu fi jiraachuu baachuu.
Geessituun gara fuula saphaphuu, fakkeenyaaf, "www.sun.com" yookiin "www.myprovider.com/mypage/index.html" geessituu haqaa dha.
LibreOffice nis, faayiliin wabeeffame geessituu keessaa jiraachuu fi bakka itti argamu irratti hirkachuun akkaataa addaan deebisa. LibreOfficeiin tokkoo tokkoo geessituu haaraa mirkaneessee galtee fi aaloo ofumaan qindeessa.Firiichi galmee maddaa erga olkeessee booda lakkada HTML uumame keessatti ilaalamuu ni danda'a.
Seerotni armaan gadii ni fayyadamu: Wabiin sadhaatawaa ("graphic/picture.gif") yommuu faayilootni lamaan ooftuu tokkicharra jiru tahe qofa danda'amu. Yoo faayilootni sirna faayilii qe'ee ke keessa ooftuu garaa garaa irraa jiru tahe, wabiin haqaa aaloo "file:"("file:///data1/xyz/picture.gif") hordofa. Yoo faayilootni kaadimoota adda addaa irraa yookiin yoo galteen geessituu hin jiru tahe, wabiin haqaa aaloo "http:" ("http://data2/abc/picture.gif") fayyadama.
Manatasaphaphuu kee ooftuu tokkicharraa tiif akka faayilii eegallii manatasaphaphuuchaatti faayiloota hundaa qindeessuu mirkaneeffadhu. Akkaataa kanaan, akka wabiin kaadimaa irraa yeroo hundaa sirrii tahutti LibreOffice iin aaloo fi galtee qindeessuu ni danda'a.
Yommuu hantuutee ke geessituu irra boqochiiftu, qacceen gargaartuu wabii haqaa agarsiifti, sababa LibreOffice iin gara keessaatii maqoota xurree haqaa fayyadamuuf. Xurree fi teessoo guutuun,faayiloota HTML akka "Barruu" tti fe'uudhaan yookiin gulaalaa barruutiin isa banuudhaan, yommuu firii alerguu HTML ilaaltu qofa ilaalamuu danda'u.
Title is: Geessitoota Sadhaatawaa fi Haqaa